StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao Phoenix، Arizona. Ny orinasa dia naorina tamin’ny novambra 2003 avy amin’i Thomas Gorny ary dia ankehitriny ampahany amin’ny Vondrona Iraisam-pirenena Maharitra (EIG).
Raha sendra tsy fantatrareo، EIG dia orinasa lehibe fampiantranoana izay efa manodidina ny 15 taona. Ny fikambanam-behivavy iraisam-pirenena dia mitazona anarana marika mihoatra ny 30 fampiantranoam-barotra – anisan’izany FatCow، BlueHost، iPage، Hostgator، JustHost، Arvixe، sy ny sisa؛ ary fananana mihoatra ny 2 tapitrisa anaran-tsolika amin’ny fotoanan’ny fanoratana.
1 Ny fanandramako amin’ny StartLogic
2 مراجعة البدء السريع
3 Fanontaniana matetika isaky ny Startlogic
Ny fanandramako amin’ny StartLogic
Manantena aho fa maro aminareo no mbola tsy nandre momba ny StartLogic alohan’ny hamakiana ity lahatsoratra ity.
Eny، izaho tsy. Mbola tsy naheno momba ny orinasa fandraisam-bahiny aho mandra-pahitako ny fikarohana nataoko tamin’ity tranonkala ity tao amin’ny 2008. Nanao sonia taona iray nanaovana fifanekena tamin’i StartLogic aho tamin’ny hm hijijery nm hijonery. Araka ny voalazan’ny reveko taloha، izay navoaka tamin’ny تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ، ny rakitra an-tserasera StartLogic dia tao anatin’ny 99.85 – 99.9٪ – tsy dia ratsy loatra ho an’ny host $ 5.95 / mo saingy azo antoka fa tsy أفضل مضيف ويب. Ny fanohanan’ny mpanjifa dia somary kely miadana، saingy amin’ny ankapobeny dia manampy sy namana ny mpiasa.
Pikantsary amin’ny takelaka Startlogic. Ny orinasa fampiantranoana dia nametraka ny vidiny ho $ 2.75 / mo vao haingana.
Ireo endri-tsoratra fototra ao amin’ny Startlogic – izay tena mitovy amin’ny ankamaroan’ny marika EIG fampiantranoana.
Startlogic dia mampiditra WebsiteBuilder (orinasa EIG hafa) mankany amin’ny drafitra fampiantranoany.
مراجعة البدء السريع
Mitombo ny vidiny aorian’ny fe-potoana voalohany – ny fe-potoana 24-volana dia manavao amin’ny $ 6.98 / الشهر
Ny tsy fahampian’ny safidy hafa – ianao dia mila manova ny tranokalan’ny web ho fampiroboroboana ny VPS na cloud hosting
Fitarainana maro momba ny fanampiana mpanjifa mangatsiaka sy tsy mahasoa
Fampiantranoana voafetra voafetra voafetra amin’ny fampiasana serivisy henjana
Fanontaniana matetika isaky ny Startlogic
Iza no Startlogic?
Startlogic dia mpamatsy serivisy fampiantranoana tranonkala izay mifantoka amin’ny fizarana fampiantranoana nizara ihany. Toa manana takelaka drafitra VPS fa noho ny antony sasany، tsy mifandraika amin’ny tranon’izy ireo izany ary amin’ny alàlan’ny fikarohana Google no ahazoana azy. Nanangona lisitr’ireo tsara indrindra fampiantranoana tranonkala izay manolotra vokatra feno amin’ny fampiantranoana ahafahanao misafidy.
Tsara ve ny Startlogic?
Amin’ny maha mpanome tolotra tranonkala mora vidy، ny Startlogic dia manolotra fahatokian-tena mety sy endri-javatra tsara sasany toy ny mpanamboatra tranokala ary fahazoan-dàlana amin’ny dokambarotra maimaim-poana. Na izany aza، tsy misy làlana fampivoarana manan-danja izany، izany hoe raha maniry ianao dia mila manana izany mifindra any amin’ny web host iray.
Lafo ve ny Startlogic?
Manomboka amin’ny $ 2.75 / mo ، ny Startlogic dia azo antoka fa iray amin’ireo بدائل استضافة الويب mora kokoa manodidina. Aza adino fa ny vidin’ny mitombo hatramin’ny $ 5.50 / mo aorian’ny vanim-potoana fisoratana anarana.
Manana drafitra maimaim-poana ve ny Startlogic?
Tsia، Startlogic dia manolotra drafitra karama fotsiny. Izy ireo dia ahitana karazam-pifandraisana maro miaraka amin’ny drafitr’izy ireo، ao koa ny anarana anarana maimaimpoana.
Aiza ireo mpizara Startlogic?
Mampalahelo fa tsy manambara ny toerana misy ireo ivon-toerana misy azy ny Startlogic.
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao Phoenix, Arizona. Uus orinasa dia naorina tamin’ny novambra
StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina ao Phoenix, Arizona. Tomas Gorny ary dia ankehitriny ampahany
Monetarisierung von YouTube: Sut mae Tiwtoriaid yn Gwneud Eu Arian
Kiel Peti Por Blogo Sponzorado Kiam Vi Estas Fervora